निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा सत्रसय त्रियासी लाभान्वित – Nepali news portal
२९ चैत्र २०७७, आईतवार १९:०० April 11, 2021 पर्वत डेष्क
पर्वत÷ पर्वत अस्पताल र फुकुओका नेपाल सोसाईटी जापानको संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको दुईदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा सत्रसय त्रियासीजना लाभान्वित भएका छन् ।
जिल्ला अस्पताल पर्वतका अनुसार एकैपटक आठवटा विशेषज्ञ सेवाका लागि १७ जना चिकित्सकहरुले चेकजाँच सेवाप्रदान गरेका छन् ।
चैत्र २७ र २८ मा गरिएको शिविरमा मुटुको अपरेशन गर्नुपर्ने ६ जना व्यक्ति भेटिएका छन् । पर्वत अस्पतालको अनुरोध र सिफारिसमा डा. अनिल भट्टराईले बिरामीहरुको निःशुल्क अपरेशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै हाड जोर्नीका समस्या भएका २० जना विरामीले एम आर आई गर्नुपर्ने अवस्था भेटिएका छन् । ७ जनाको नाक कान घांटीको अपरेसन गर्नुपर्ने भेटिएका छन् ।
स्वास्थ्य शिविरबाट लुकेर रहेका स्वास्थ्य समस्याहरुको पहिचान हुने र समयमा नै उपचार पाउने अवस्था आउने यो शिविरबाट लाभान्वित भएको जिल्लाअस्पताल पर्वतका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले बताए ।
जापानमा बसेर प्रोत्साहित गर्ने, सहयोगगर्ने फुकुओका नेपाल सोसाईटीका अध्यक्ष शिव शर्मा लगायत सवै पदाधिकारी र सदस्यहरु त्यसैगरी फुकुओका नेपाल सोसाईटीे जापानमा कार्यरत चुवा निवासी सुजन केशी. लगायत यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरलाई अर्थपूर्ण बनाउन सहयोग गर्नुहुने, प्रचार प्रसारमा सहयोगगर्ने लायन्स क्लवहरु, रोटरि क्लव, ईनरह्विल क्लव, जेसिज लगायत पत्रकार तथा पर्वत अस्पतालको डा. ढुण्डिराज पौडेल अध्यक्ष पहाडीले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले फैसला नदिएकोमा नेता नेपाल असन्तुष्टि